विश्वकप क्रिकेटः पहिलो बलमै आमिरले लिए विकेट ! – Everest Dainik – News from Nepal
विश्वकप क्रिकेटः पहिलो बलमै आमिरले लिए विकेट !
काठमाडौं, असार ८ । इंग्ल्याण्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानले दिएको ३०९ रनको लक्ष्य पछ्याएको दक्षिण अफ्रिकाले दोस्रो ओभरमै विकेट गुमाएको छ । उसले १.१ ओभरमै पहिलो विकेटका रुपमा हाशिम अमला (२) लाई गुमाएको हो । उनलाई मोहम्मद आमिरले आफ्नो पहिलो ओभरको पहिलो बलमै एल्बीडब्लू आउट गरे ।
यसअघि लड्स क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले निर्धारित ५० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर ३०८ रन बनायो । उसका लागि हरिस सोहेलले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । उनले ९ चौका र ३ छक्काको मद्दतमा ५९ बलमा ८९ रन बनाए ।
यस्तै बाबर आजमले ६९, फखर जमान, इमाम उल हकले ४४–४४, मोहम्मद अफीजले २०, इमाद वासिमले २३, वहाब रियाजले ४ रन बनाए । यस्तै कप्तान सरफराज अहमद २ र शादाब खान १ रनमा अविजित रहे ।बलिङमा दक्षिण अफ्रिकाका लुंगि एन्गिडीले ३, इमरान ताहिरले २, एन्डिले फेहलक्वायो, लुंगि एन्गिडी र एडन मार्कले एक–एक विकेट लिए ।
ओपनर फखर जमान र इमाम उल हक ४४–४४ रनमा आउट भएका छन् । फखर १५।५ ओभरमा र इमाम २०।३ ओभरमा आउट भएका हुन् । उनी दुवैलाई इमरान ताहिरले आउट गर्न सफल भए । फखरले ६ चौका र १ चौकाको सहयोगमा ५० बलमा ४४ र इमामले ६ चौकाको मद्दतमा ५८ बलमा ४४ रन बनाएका हुन् । पाकिस्तानले आज प्लेइङ ११ मा २ खेलाडी परिर्वतन गरेको छ । उसले हसन अलि र सोयब मलिकको स्थानमा हरिस सोहेल र शाहीन शाह अफ्रिदिलाई मौका दिएको छ ।
ट्याग्स: Hashim Amla, Mohammad Amir